Kandidàn’i Ankolafy Ravalomanana : Dr ROBINSON Jean Louis ? – MyDago.com aime Madagascar
Kisendrasendra ve sa efa tao anatin’ny kajy no nahatonga ny kandidà Robinson Jean Louis hiara-dalana tamin’ny Ankolafy Ravalomanana omaly teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ? Mitodika any amin’izay ho mety kandidà hotohanan’ny Ankolafy Ravalomanana amin’ireo kandidà 33 ny sain’ny mpanara-baovao. Rahampitso Sabotsy no mety ahalalana izay valim-panontaniana izay, hiditra mivantana amin’ireo mpomba azy ny filoha Ravalomanana rahampitso etsy amin’ny Magro Behoririka hanome ny toromarika rehetra hanohizana ny tolona.
Roa ny kandidà tsara toerana amin’izay ho safidin’ny Ankolafy dia i Rajemison Rakotomaharo izay efa niaraniasa akaiky tamin’ny filoha Ravalomanana ary ny Dr Robinson Jean Louis. Ity farany no mety ho tsara toerana amin’io fanohanan’ny Ankolafy Ravalomanana azy ho filoham-pirenana ho avy eo. Tsy manan-tsafidy (?) ny ankolafy Ravalomanana raha mbola té hanohy hatrany ny « lalao politika », mba tsy ho very toy ny nataon’ny amiraly Ratsiraka sy ny Pr Zafy Albert, ka hiady mafy eo amin’ny fifidianana solom-bavambahoaka. Manana ny toerana misy azy mantsy ny vondrona manana depioté maro an’isa ao amin’ny firenena iray.
Hisedra olana ihany anefa ny mpiaradia (vahoaka mpitolona) sy ireo lohandohan’ny mpisorona hanaiky sy hifidy izay olona tsy niara-niharitra ny tolona nandritra izay dimy taona izay, misy ny tena nifoka lakrimozena an-taonany, nisy ny nigadra, nisy ny very asa, nisy no niharan’ny fanenjehina isan-karazany, nisy ny rovitra pataloha sy main’ny hain’andro, nisy ny lany rondoha, kanefa amin’ny maha tolona azy dia ny fahatrarana ny tanjona no tokony ho kendrena.
Tsy fotoanan’ny fanomezantsiny intsony izao fa fotoana fandraisana fanapahan-kevitra, mba ialana amin’ny fizarazarana sy ny tsy fitovizana fomba fijery ( toy ny teo aloha) dia tsara raha ampirimina ny hambompo sy ny tsy fitovian-kevitra. Raha mbola ao anatin’ny Ankolafy Ravalomanana dia mazava ho azy fa ny tenin’ny filoha Ravalomanana hatrany no tokony haran’ny mpiara-dia aminy. Matoa mantsy izay no safidin’ny filoha Ravalomanana dia efa azony antoka fa mitovy ny tandi-dokanga.
RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : MISY ADIDY LEHIBE MIANDRY ANTSIKA ATSY HO ATSY
Auteur Solo Razafy*Publié le 6 septembre 2013 6 septembre 2013 Catégories Politique
16 pensées sur “Kandidàn’i Ankolafy Ravalomanana : Dr ROBINSON Jean Louis ?”
Diversion sa tena tsy à la page ianareo izany ? Raha ny feo tonga taty ampoti-tsofinay indray dia toa hoe Ingahy Fetison no tena « naroso » ?
Amiko aloha izany dia tsy mahagaga, satria efa ela no nandrenesana an’ilay fika ! Volana tantely efa vita !
Miandry ny kabary sy ny hafatry ny Filoha Ravalomanana sisa !
Aiza ny fiarovana ny ara-dalàna sy ny hoavin’ny vahoaka, taranaka sy fara aman-dimby amin’izany resaka rehetra izany ?
Izany ve no nieretan’ny vahoaka nandritry ny DIMY TAONA SY NANOMEZANA FAHEFÀNA AN’IREO MPANONGAM-PANJAKÀNA ????
Sao dia tsy rariny kosa ê !!
IZAHAY VAHOAKA dia tsy hanaiky andray anjary mihintsy amin’na fifidianana tsy misy an’ i Dada, Marc Ravalomanana na i Neny Lalao Ravalomanana Rakotonirainy ! ! !
Misy fahamarinany kosa laoha ny voalazan’i Ra8 Ra-8 ihany io eee!
Diniho amin’ny saina mandinika kosa
Inona no zavatra tanteraka tamin’ireo nitolomana teo amin’ny magros nandritra izay taona maro izay ?
ho hita eo izay lazain’i Dada rahampitos
Aoka tsy hisolo vava ny Filoha RAVALMANANA isika ary hanao ankamantatra mikasika izay ho lazain’ny Filoha mikaika izay candidat na candidate mety na tsy mety ny hanekena ny fanohanana azy..Ary tsy ny Filoha irery no handidy izany fa tsy hentina eo amin’ny ankolafy RAVALOMANANA MARC izany
Avelao izahay hampiasa ny fahafahana mifidy !
» RY AMPITSO IZAY MIFONO MYSTERY ! »
1.- Misy maro no mifanontany na hisy fifidianana izay ho Filohan’ny Firenena sa tsia..?
.ny fitondrana dia milaza fa amin’ny 25 octobre izao ny fihodinana voalohany ..!
Moa ve ampy ny antoka manaja ny fahalalahana , ny safidy malalaky ny Mpifidy , ny démocratie ho amin’izany fifidianana izany ?
Moa ve ho vonona amin’io fotoana io ny cartes d’identité ho an’ireo Malagasy mahazo mifidy 250000 ,nefa tsy manana izant CIN izany ?
Ho vita amin’io fotoana io ve ny fanontana ireo bulletin unique ?
Moa ve afaka hifanandrina amin’ny herin’ny Droit de l’Homme et du Citoyen io fanakavahana nataon’ny CES faharoa ,izay nanala candidatures ,izay tsy mitobona ny antony Ary indrindra fa tsy naseh ny chambre d’accusation ny chef d’inclpation mba ho dinihany na mifanaraka amin’ny lalàna na tsia ?
Tsy afaka ao an-tsaina mantsy ny tarehin’io fomba nitsaran’ny ces faharoa ,izay tarehy mitovy amin’ny didi-jadona !
Ary oviana moa no tambazana ny mpitsara teto ? Tsy midika ho fitsarana sy mpitsara voavidy ve izao ?
Ary raha tsy misy ilay fifidianana ,fa kosa hatao fa hanaraka izay voalazan’ny tondrozotra ,tsy rariny ary tsy ara-dalàna ve raha hesorina amin’ireto mpitsara ireto ny automobiles nomena azy ireo ?
Satria maro mitory fa sarintsarim-pifidianana ny baiko nefan’ny ces faharoa ,koa raha manampy izany ity tamby na tsolotra nomena ireto mpitsara ireto ?
2.-Tao aorian’ny resaka an-téléphone tamin’ny 31 août nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , dia ireo olona mifanontany ireo ihany no maminaviana ka milaza hoe :
-ny Filoha RAVALOMANANA MARC hivory miaraka amin’ireo GIC-M vaovao izay nisolo an’i chissano sy ny namany
Mety handinika ny asan’ireo nosoloiny izy ireo na hanontany ny Filoha izy ireo mikasika ny zava-bitan’ny ekipa chissano
Ary raha tsikarin’izy ireo moa fa nataon-dry chissano halasafay ny fametrahana ny tondrozotra ary tsy vitan’izay fa toa nisy havakavaka ( sélection des articles) ny andininy notanterahana ary misy tsy notanterahana fa nahilika.
Ary lasa ny revirevy…Raha tezitra izy ireo na raha tsapan’ireto vaovao fa be ny hadisoana vita na fanahy iniana na tsy fahaiza-manao dia tsy hijanona eo izy ireo fa hamerina atrany am-piandohana ary hilaza sy hanoratra izy ireo « fa tsy nanara-dalàna ilay asa natao vonjy maika ,ka tsy hafaka hanohy anio izahay fa ho fehezinay ary hampiriminay satria TOUTES LES DECISIONS PRISES ONT ETE PRISES SANS AUCUN DISCERNEMENT ER DE FAçON TENDANCEUSE POUR NE PAS DIRE PARTIALE ET INJUSTE DONC NOUS CLASSONS CE DOSSIER NUL ET NON AVENU …!ET NOUS REPRENONS LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE INTEGRALE »
….Dia aleonay manomboka fa toa tsy nisy zavatra natao teo alohanay..
Toa izay ny resaka ireto be fandinihana..
Iza moa no hanohitra raha tian’izy ireo ny manomboka ny mise en oeuvre de la feuille de route INTEGRALE manomboka ny article 01 ka atramin’ny article 45..
Izany hoe ireo articles mikasika ny haino amanjery ,mikasika ny gadra politiques , ikasika ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!
….Vita ny fametrahana ny tondrozotra , dia apetraka ny rafi-pitondrana : présidence sy ny gouvernement !
…..Raha tafatsangana soamantsara ny tetezamita vaovao ifanarahana ,tsy manavaka ,dia andraikitr’io tetezamita io no mikarakara ny fifidianana izay ho Filohan’ny Firenena sy ireo solobavabahoaka !
HOY NY GAZETY HEHY MOMBA IZAO NOFONOFY IZAO :
« REVIREVY D’AUJOURD’HUI ,PERSPECTIVE DE DEMAIN ! »
« MAHERY SY LEHIBE ARY BE FITIAVANA ANDRIAMANITRA!
MAHAY NY ZAVATRA REHETRA IZY :IZY NO NANAO NY LANITRA SY NY TANY ARY NY RANOMASINA !
LEHIBE JEHOVAH ! »
6 septembre 2013 à 19 h 52 min
DIA MBOLA TSY HAINAO FOANA VE RA-CELESTIN NY VALIN IREO FANONTANIANA IREO .tsy hasian ‘ny Frantsay sy ny mpanompony sira izany ./.
OLGA ,HANITRA,MAMY ,RAVTOMANG,IHANTA dia samy ao anatin io Fitondrana io ,sa fitondrana inona no tianao lazaina?
6 septembre 2013 à 19 h 53 min
Izao aloha dia haleoko I Fatison ,rangahy io anie ka efa voahenjika ary efanigadra noho ny tolona .
Haleoko kokoa manao bolcage admnistratif ,ka manomboka @ ireo ministra ireo izany .
Ny maika ao anatin’ny maika (La priorité des priorités) dia ny fanavotanan’ny Tanindrazana.Aza mba atao ambaninjavatra io
Satria ny Foza dia miroso eny foana,ary dia tokony ataon_tsika ny hanakanana an’izany @ fomba rehetra.
Dia ny FOZA indray ve no havela hanjaka eo avy eo ? Aoka mba @ fisainana no hitondrana ny tolona fa tsy @ fatezerana
6 septembre 2013 à 20 h 43 min
Hevitry ny avy aty amin’ny faritra mba diniho ihany ny hoe raha mbola olona avy ao Analamanga tompoko ankoatran’i Lalao Rakotonirainy dia sarotra ny hahalany azy! izay no nahatonga ny safidy ho an’i @Atoa Botozaza.
Azafaaaady ! Tsy Robinson J.louis akory no nahongan’ilay jouet’l mbazah teo an!fa ny filoha RAVALOMANANA.Mampalahelo moa fa ilay Jouetl sy ny arbitre’ny no sur terrain fa ny adversaire DIRECT aaaaany lavitra any ,dia solontenany no milalao ny baolina ! Raha tiana hiady ny lalao baolina kitra TENA IZY,dia aleo ho tonga « sur terrain » izy e!Fa inona kay ti-hatahorana ???????
Zokibefitia dit :
7 septembre 2013 à 7 h 25 min
Mba jereo ihany izay tena mikatsaka ny hampisondrotra ny sarababembahoaka. Raha olona tahak´io sisa no hitan’ny ankolafy ho tohanana dia mampalahelo ny fandaniankery t@ ity tolona ity.
Atoroy lalankombana mendrika ireo tanora izay handray ny anjara adidiny ao afara.
Tsy hilaza betsaka momba io rangahy io aho fa izao fotsiny afaka efataona vao nipoitra ny lohany. Ankoatry ny zavatra hafa azo tsikeraina dia izany ve no angatahina tsodrano @ ireo mpitolona. Tsy aleo tsy misy.
7 septembre 2013 à 9 h 19 min
izaho aloha tsy ao @ antoko Zanak’i Dada fa io anaram-pitafako io efa nampiasaiko hatr@ nanombohako nidirako teto 2 taona teo izay. Ny tiako ho marihina koa dia na iza na iza mpihadina ho filoham-pirenena ka atolotry ny Filoha Ravalomanana dia vonona aho hanohana azy fa izay no maha filoha mpitarika azy amiko. Ny tokony ataon’ny ankolafy Ravalomanana dia tsy miandry ela intsony tahaka ny nataonareo nadritra izay fiaraha-mitantana izay fa atombohy dieny izao ny fitetezam-paritra tsy ampihena ny risi-pon’ny vahoaka taoriana ny fitsipahana an’ny Rtoa filoha Ravalomanana Lalao izay. Mba afaka manome antoka ny vahoaka ve ianareo ohatra fa tena hiady @ hala-bato mety hiseho @ ireto mpifanina jokotsorika iray vala ireto. Asa re raha azo heverina dieny izao ny fanaovana lalana ny fifampitahana ny voka-pifidianana (confrontation des résultats)@ izay toerana nisy nampiahiahy rehetra. Izany no noheverina tompoko dia ny zavatra efa hita nataonareo teo toa manaraka ambokony fotsiny, tena miady ve ireto sa mody miady nefa ny atsy ankilany mahavita mitory sy manetsika izao rehetra izao rehefa misy zavatra tiany hatao.
malagasytiako dit :
13 septembre 2013 à 8 h 12 min
Aaa kosa e! tsy manaiky olona tsy nitolona hitondra ny anaran’i Dada izany aho! tena marina. Rehefa hanohana ihany, Atoa Fetison efa nofidianao ho filohan’ny Delegasiona tany aloha ry Dada, izy no tokony hotohanana satria izy efa nitarika anay tamin’ny tolona. Nalahelo mintsy izahay fa nigadra izy dia tsy niverina ho filohan’ny delegasiona intsony avy eo, asa izay nitranga tao. Ianareo rehetra mpitarika ny ankolafy tokony handinika tsara.
13 septembre 2013 à 9 h 04 min
Efa manao fanambaràna ho an’ny mpanao gazety angamba izay ny Filoha Ravalomanana !
Tandremo sao dia kofona, ary asio rano mangatsiaka amin’ny vera, tsy lavitr’anareo !
Aza misy kivy ! Miandry anareo rehetra ny Tanindrazana !
13 septembre 2013 à 14 h 37 min
Dia asianareo sira be ity izy fa izay anie ny tanjony e!!!
Mba ahafantarana azy NOHO I DADA dia mba atsofotsofoka aty aloha
sao misy mipitika any aminy ny zNk’i dada.
Misy SOMARY marina ihany ny voalaza etsy ambony ny momba an’i Fetison fa saingy efa TARA kely,
efa miariary izao fa TETIKA MANARA-PANITRA no NANAGADRANA azy mba azahoan’i Kotovelo ny
toerany, EFA FANTATRA IZANY, dia @’izao mbola mitady HAKA NY TOERAN’i NENY koa ??????
Izay no mankaleo ahy eto indraindray , dia tsy menatra fa mbola nisolantsolana tany Antsimo….. leo be za!!!!
ny mety ranga de neny ihany no milatsaka ihany no vaolana de ny fodiny dada fa zay ihany ny solution eto rehefa tsymody dada de tsy msy fifidianana vanina
Précédent Article précédent : Ankolafy Ravalomanana : hamerina an’i Dada an-tanindrazana no tanjona
Suivant Article suivant : RAKOTOAMBOA JENA LOUIS : TADIAVIN’NY SASANY HO ENTINA ANY AN-KADY ITY FIRENENA ITY